အဝေးမှ အလုပ်လုပ်ခြင်း - ဝီကီပီးဒီးယား
၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် အိမ်တွင်အခြေစိုက်သော လုပ်သားအင်အား၏ ရာခိုင်နှုန်း
အဝေးမှ အလုပ်လုပ်ခြင်း (Remote work) သို့မဟုတ် အဝေးလုပ် အလုပ်လုပ်ခြင်း (Distance working)၊ တယ်လီစနစ်အလုပ် (Telework)၊ တယ်လီစနစ် အလုပ်လုပ်ခြင်း (Teleworking)၊ ရွေ့လျားစနစ်အလုပ် (Mobile work)၊ အဝေးလုပ် အလုပ် (Remote job)၊အိမ်မှ အလုပ်လုပ်ခြင်း (Work from home)နှင့် နေရာမရွေးမှ အလုပ်လုပ်ခြင်း (Work from anywhere) သည် ရုံးခန်းအဆောက်အဦး ၊ ဂိုဒေါင် သို့မဟုတ် စတိုးဆိုင် ကဲ့သို့သော အလုပ်နေရာတစ်ခုခုသို့ အသွားအပြန် မလုပ်ပဲ အိမ်မှ သို့မဟုတ် တစ်နေရာရာမှ အလုပ်လုပ်နိုင်ရန် စီစဉ်ထားသော အလုပ်တစ်ခု ဖြစ်သည်။
၁.၁ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု အစိုးရ
၃ COVID-19 ကပ်ရောဂါ၏ သက်ရောက်မှုများ
အိမ်မှနေ၍ တယ်လီဖုန်း၊ တဲလ်စ်၊ မိုဒဲမ်စသည်တို့ဖြင့် ဆွက်သွယ်ပြီး အလုပ်လုပ်ခြင်းဖြစ်တဲ့ အိမ်မှတယ်လီစနစ် အလုပ်လုပ်ခြင်း (Telecommuting) သည် ၁၉၇၀ ပြည့်လွန်နှစ်များတွင် တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ရေးနှင့် ခရီးသွားလာရေးဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာများကို အလုပ်နှင့်ပတ်သက်သည့် အစားထိုးမှုများကို ဖော်ပြရန် ဖြစ်လာခဲ့သည်။
၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင် “အလုပ်သည် သင်လုပ်သောအရာ၊ သင်သွားသောအရာမဟုတ်” ဟူသောဆောင်ပုဒ်ကို တီထွင်ခဲ့သည်။ "အလုပ်သည် ငါတို့လုပ်သောအရာ၊ ငါတို့သွားသောနေရာမဟုတ်"နှင့် "အလုပ်သည် ငါတို့ရှိရာ၊ ငါတို့မရှိရာအရပ်မဟုတ်" စသည်ဖြင့် ဆောင်ပုဒ်များ ပေါ်ပေါက်လာသည်။ အိမ်မှတယ်လီစနစ် အလုပ်လုပ်ခြင်း (Telecommuting) စနစ်ကို စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ အစိုးရများနှင့် အကျိုးအမြတ်မယူသော အဖွဲ့အစည်းများစွာတို့က လက်ခံကျင့်သုံးကြသည်။ အဖွဲ့အစည်းများသည် ကုန်ကျစရိတ်များ (တယ်လီအလုပ် လုပ်သောဝန်ထမ်းများသည် လိုအပ်သော ရုံးခန်းငှားရမ်းရန် သို့မဟုတ် ဝယ်ယူရန် မလိုအပ်ဘဲ မီးအလင်းရောင် စသည်ဖြင့် အပိုကုန်ကျစရိတ်များ)ကို လျှော့ချရန်အတွက် ဤစနစ်ကို အသုံးပြုနိုင်ပြီး အချို့သော အဖွဲ့အစည်းများသည် တယ်လီစနစ်ဖြင့် အလုပ်လုပ်စေခြင်းဖြင့် ပုံမှန်ဖြစ်လေ့ရှိသော ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုတွင် ပိတ်မိနေသော အချိန်နှင့် အသွားအပြန်အချိန်များကို လျှော့ချပေးသောကြောင့် အလုပ်သမားများ၏ ဘဝအရည်အသွေးကို မြှင့်တင်ပေးသည်။ ထို့အပြင် အလုပ်သမားများအတွက် ၎င်းတို့၏ အလုပ်တာဝန်များအပြင် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဘဝနှင့် မိသားစုအခန်းကဏ္ဍများ (ဥပမာ။ ကလေးသူငယ်များ သို့မဟုတ် သက်ကြီးရွယ်အိုမိဘများကို ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း)နှင့် ၎င်းတို့၏ အလုပ်တာဝန်များကို ချိန်ညှိရန် ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ တယ်လီစနစ်ဖြင့် လုပ်စေခြင်းဖြင့် လမ်းများပေါ်တွင် ကားများနည်းပါးလာသောကြောင့် ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုနှင့် လေထုညစ်ညမ်းမှုကို လျှော့ချနိုင်ခြင်းကြောင့် အချို့သောအဖွဲ့အစည်းများသည် အိမ်မှတယ်လီစနစ် အလုပ်လုပ်ခြင်း (Telecommuting)ကို လက်ခံကျင့်သုံးကြသည်။
၂၁ ရာစုရှိ တယ်လီလုပ်သားများသည် ကော်ဖီဆိုင်များမှ အလုပ်လုပ်ရန် Wi-Fi တပ်ဆင်ထားသော လက်ပ်တော့ပ် ကွန်ပျုတာ သို့မဟုတ် သင်ပုန်းကွန်ပျုတာများနှင့် စမတ်ဖုန်း များကဲ့သို့သော မိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာကို အသုံးပြုကြသည်။ ထို့အပြင် ၎င်းတို့၏အိမ်၌ရှိသော ဒက်စတော့ပ် ကွန်ပျုတာနှင့် ကြိုးဖုန်း တစ်လုံးကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ ရိုက်တာ စစ်တမ်းတစ်ခုအရ "ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ အလုပ်သမားငါးဦးတွင် တစ်ဦး၊ အထူးသဖြင့် အရှေ့အလယ်ပိုင်း၊ လက်တင်အမေရိကနှင့် အာရှရှိ ဝန်ထမ်းများသည် မကြာခဏဆိုသလို တယ်လီစနစ်ဖြင့် အလုပ်လုပ်ကြပြီး၊ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးက အိမ်မှ နေ့တိုင်း အလုပ်လုပ်ကြသည်" ဟု ရိုက်တာ စစ်တမ်းတစ်ခုအရ သိရသည်။ ၂၀၀၀ ခုနှစ်များတွင် တစ်နှစ်တာခွင့်ရက် သို့မဟုတ် အားလပ်ရက်များဟာ အလုပ်ခွင်မှ ပျက်ကွက်ခြင်းဟု ရှုမြင်ကြပြီး အချို့သော ရုံးဝန်ထမ်းများသည် အားလပ်ရက်တွင် အလုပ်အီးမေးလ်များကို ဆက်လက်စစ်ဆေးရန်အတွက် တယ်လီအလုပ်အနေဖြင့် အလုပ်လုပ်ကြသည်။
COVID-19 ကပ်ရောဂါ ကာလအတွင်း သန်းပေါင်းများစွာသော အလုပ်သမားများကို အဝေးမှ ပထမဆုံးအကြိမ် အလုပ်ဆင်းခိုင်းသည့်အခါ အဆိုပါအလေ့အကျင့်သည် ပိုမိုလက်တွေ့ကျလာပါသည်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ အိမ်မှတယ်လီစနစ် အလုပ်လုပ်ခြင်း (Telecommuting)မှ အဝေးမှ ထိန်းချုပ်ပြီး လုပ်နိုင်သော အဝေးလုပ် အလုပ်လုပ်ခြင်းစနစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားခဲ့သည်။
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု အစိုးရ[ပြင်ဆင်ရန်]
အမေရိကန် မရိန်းတပ်ဖွဲ့ သည် အရပ်ဘက်ဝန်ထမ်းများအား အိမ်မှ တယ်လီစနစ်ဖြင့် အလုပ်လုပ်ရန် ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် စတင်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။
၂၀၀၀ ခုနှစ်မှစ၍ US ဖက်ဒရယ်ဥပဒေ (Department of Transportation and Related Agencies Appropriations Act)သည် ဝန်ထမ်း၏ စွမ်းဆောင်ရည် မလျော့သရွေ့ အိမ်မှတယ်လီစနစ် အလုပ်လုပ်ခြင်း (Telecommuting)ဖြင့် အလုပ်လုပ်နိုင်ရေး မူဝါဒတစ်ခုကို ချမှတ်ရန် လိုအပ်လာသည်။
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့နှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းတို့၏ ၂၀၂၁ ခုနှစ် အစီရင်ခံစာအရ တယ်လီစနစ်ကို တိုးချဲ့ခြင်းသည် တစ်ပတ်လျှင် အလုပ်လုပ်ချိန် ၅၅ နာရီအထိ တိုးလာပါက အလုပ်သမားများအကြား ကျန်းမာရေးဆုံးရှုံးမှု တိုးလာနိုင်သည်။ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်က အစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်ရာတွင် Covid-19 ကူးစက်ရောဂါကို တုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် တယ်လီစနစ်ကို တိုးမြှင့်ခြင်းသည် အလုပ်ချိန်ကြာမြင့်ခြင်းမှ ရောဂါ၏ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကို တိုးမြင့်လာစေပြီး အစိုးရများအနေဖြင့် ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူရန်နှင့် ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သော အလုပ်ချိန်ကန့်သတ်ချက်များကို ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် ဥပဒေဖြင့် ချမှတ်ထားပြီးကြောင်း၊ ပြဋ္ဌာန်းထားကြောင်း သေချာစေရန် တောင်းဆိုထားသည်။
COVID-19 ကပ်ရောဂါ၏ သက်ရောက်မှုများ[ပြင်ဆင်ရန်]
လေ့လာစမ်းစစ်သူများသည် COVID-19 ကူးစက်ရောဂါသည် အဝေးမှ အလုပ်လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် "အကြံပြုညွှန်ပြချက်" ဖြစ်နိုင်သည်ဟု ဆိုထားကြသည်။ အဝေးမှအလုပ်လုပ်ခြင်းကို "အလုပ်၏အနာဂတ်" အဖြစ်ဖော်ပြခဲ့သည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် အချိန်ပြည့်ဝန်ထမ်းများ၏ ၇၀% နီးပါးသည် အိမ်မှအလုပ်လုပ်ကြသည်။ ကုမ္ပဏီတော်တော်များများက ဝန်ထမ်းတွေကို အိမ်ကနေ အလုပ်လုပ်ခိုင်းကြသည်။  Microsoft ၊ Amazon ၊ Facebook နှင့် Google ကဲ့သို့သော အချို့သော ကုမ္ပဏီများသည် အလုပ်သမားများအား တစ်နှစ်တာလုံး အိမ်မှ အလုပ်ဆင်းခွင့်ပြုလိုက်ကြသည်။ Twitter ကဲ့သို့သော ကုမ္ပဏီများသည် ၎င်းတို့၏ ဝန်ထမ်းများကို အခြေခံအားဖြင့်အမြဲတမ်း အိမ်မှအလုပ်လုပ်ရန် ခွင့်ပြုထားသည်။ Google သည် ဝန်ထမ်းများအား ၎င်းတို့၏ အိမ်ရုံးများ ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်အတွက် ပြန်လည်ပေးဆပ်ရန် ကမ်းလှမ်းထားသည်။
Eurofound ၏ အဆိုအရ ဥရောပတွင် လက်ရှိအလုပ်လုပ်နေသူများ၏ ၄၀% နီးပါးသည် COVID-19 ကူးစက်ရောဂါကြောင့် အချိန်ပြည့် တယ်လီစနစ် အလုပ်လုပ်ကြသည်။ သို့သော်လည်း ဝေးလံခေါင်သီသော အလုပ်သမားများ၏ အချိုးအစားသည် ဥရောပအတွင်းရှိ နိုင်ငံများကြားတွင် ကွဲပြားပါသည်။ ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကြောင့် အဝေးထိန်းအလုပ်လုပ်ကိုင်မှု တိုးလာခြင်းသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် အင်တာနက်အသုံးပြုခွင့်ကို တိုးမြင့်လာစေနိုင်သည်ဟု ဆိုထားကြသည်။ COVID-19 ကပ်ရောဂါသည် ပညာရေးပုံစံအားလုံးကို ထိခိုက်စေခဲ့ပြီး ကျောင်းများနှင့် တက္ကသိုလ်များကို အွန်လိုင်းသင်ယူမှုအဖြစ် ပြောင်းလဲခဲ့သည်။
↑ What is telework?
↑ Google Books Ngram Viewer။ books.google.com။
↑ Microsoft (2012)။ Ordinary Or Extraordinary?။ My Career။ Fairfax Media။ 20 May 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 18 January 2022 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Mobile Worker Toolkit: A Notional Guide။ GSA EnterpriseTransformation။ GSA (2011)။ 26 September 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 18 January 2022 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ 'Work from anywhere' is here to stay. How will it change our workplaces? (in en-US) (2020-11-12)။
↑ Telework legislation။ U.S. Office of Personnel Management။
↑ "Global, regional, and national burdens of ischemic heart disease and stroke attributable to exposure to long working hours for 194 countries, 2000–2016: A systematic analysis from the WHO/ILO Joint Estimates of the Work-related Burden of Disease and Injury" (May 17, 2021). Environment International 154. doi:10.1016/j.envint.2021.106595. PMID 34011457. “The population prevalence of exposure to long working hours increased substantially between 2010 and 2016. If this trend continues, it is likely that the population exposed to this occupational risk factor will expand further. Potential reasons for this include expansion of the gig economy, the uncertainty introduced, and new working-time arrangements (e.g., on-call work, telework, and the platform economy).”
↑ "Coronavirus could beatipping point (finally) for telecommuting"၊ GeekWire၊ March 6, 2020။
↑ "The Case for Letting People Work From Home Forever"၊ Wired၊ 2021-05-12။
↑ "Amazon, Google, Facebook, and Microsoft are asking Seattle-based staff to work from home because of coronavirus"၊ The Verge၊ March 5, 2020။
↑ "Seattle traffic disappears as Amazon, Microsoft, others enforce remote work policies"၊ GeekWire၊ March 5, 2020။
↑ "Twitter will let some employees work from home 'forever'"၊ May 12, 2020။
↑ CNBC (2020)Google will reimburse up to $1,000 for employees to buy work-from-home gear, https://www.cnbc.com/2020/05/26/google-will-give-employees-up-to-1000-to-buy-work-from-home-gear.html
↑ Telework in the EU before and after the COVID-19။
↑ Eurofound (2020) Living, working and COVID-19 First findings – April 2020, https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef20058en.pdf
↑ "'Can everyone mute?' Coronavirus means we must telecommute. We're not ready"။
↑ The impact of COVID-19 on education - Insights from Education ataGlance 2020။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အဝေးမှ_အလုပ်လုပ်ခြင်း&oldid=733737" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၁ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၂၊ ၀၇:၅၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။